Amiir Mohamed Bin Salman oo kulan xasaasi ah la yeeshay Obama – VIDEO | shumis.net
Home » News » Amiir Mohamed Bin Salman oo kulan xasaasi ah la yeeshay Obama – VIDEO
Amiir Mohamed Bin Salman oo kulan xasaasi ah la yeeshay Obama – VIDEO
Mohamed Bin Salman oo ah Wasiirka Gaashaandhiga ee Boqortooyada Sacuudiga ahna wiilka Boqorka Sacuudiga ayaa safar uu ku yimid magaalada Washington la sheegay inuu la xariiro sidii loo hagaanjin lahaa xiriirka soo xumaanayey ee dalalka Maraykanka iyo Sacuudiga.
Mohamed Bin Salman ayaa lagu tilmaamaa xiligan inuu yahay ninka ugu awooda badan boqortooyada Sacuudiga, isla markaana horseedka u ahaa dagaalkii Sacuudiga ku qaaday Xuuthiyiinta Yemen.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa muddooyinkii danbe si weyn u dhaliilaysay heshiiskii dhexmaray Maraykanka iyo IRAN ee la xariiray barnaamijka Nukliyeerka ee wadankaasi Iran. Bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa sidoo kale xiisad ka taagneyd olole ay wadeen qaar kamid ah xildhibaanada Maraykanka oo doonayey in la shaaciyo Warbixintii gudigii baaritaanka weeraradii 911, warbixinadaasi oo la sheego in ay ku jiraan qoraalo xaqiijinaya in xubno kamid ah Boqortooyada Sacuudiga ay ku lug lahaayeen weerarkaasi.
Kulankii ka dhacay Aqalka Cad ee dhexmaray Madaxweyne Obama iyo Mohamed Bin Salman ayaa ahaa mid alabaabadu u xirnaayeen oo loo diiday inay saxaafada ka qeyb gasho.
Wasiirka Gaashaandhiga Sacuudiga Mohamed Bin Salman ayaa sidoo kale booqasho ku tagay xarunta Gaashaandhiga Maraykanka ee Pentagon oo la sheegay inay ka wadahadleen iskaashiga militari ee ka dhaxeeya labada dhinac.
Title: Amiir Mohamed Bin Salman oo kulan xasaasi ah la yeeshay Obama – VIDEO